Omuma mgbapụ Site Tarkov mbanye anataghị ikike ats Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Omuma Izere Site Tarkov mbanye anataghị ikike
Ma ndi egwu mmadu na ndi bot scav agaghi adaputa oge obula inwere ngwa a.
Hụ ihe kpatara ọtụtụ mmadụ ji atụgharị gaa na ngwa ọrụ a - Purzụta Ngwaahịa ụbọchị 1 taa!
Otu ụbọchị ezughi oke maka ọtụtụ ndị ọrụ anyị, anyị ghọtara ihe kpatara ya - chazụta Igodo nke izu 1 izu!
Na-achọ ịghọ onye a kwadoro na onye GamePron? Zụta Ngwaahịa Ngwaahịa ọnwa 1!
Anyị bụ ụdị ụdị dị iche iche ebe a na GamePron - ị dịla njikere ịbụ akụkụ nke nke ahụ?
Izere Tarkov Ochie mbanye anataghị ikike Ozi
Agbanahụ Tarkov bụ nke a na-echekarị maka ndị chọrọ ahụmịhe siri ike karị, ebe ọ bụ na onye ọ bụla nwere mmasị igwu “egwuregwu dị mfe” ga-aka ihe ọzọ mma. Tokwesịrị iburu akpa gị ma pụọ ​​maka mwakpo na ozi ọ bụla, nke pụtara na ọnwụ nwere ike ịkọwa njedebe nke ọchịchị EFT gị! Iji anyị EFT Omuma mbanye anataghị ikike nyere gị ohere ka ụfọdụ n'ime ndị kasị dị ike atụmatụ mgbe hụrụ na a cheat, nke pụtara na ị ga-enwe ike kpọkọta ndị kasị baa uru ngwongwo na oge ọ bụla. Ma ọ bụ AI ma ọ bụ Human Scav na-achọ iwepụ gị, iji EFT Classic Hack bụ ihe dị mkpa.
Nke a mbanye anataghị ikike atụmatụ Enemy ESP, Info, na ọtụtụ ndị ọzọ ESP nhọrọ (Bots, Items, and Exit Gates) na-eme ka gị Raids nnọọ mfe. Ejiri Aimbot nwere ọtụtụ atụmatụ bara uru dịka Aim FOV ma ọ bụ Ezigbo Elu, na ị nwedịrị ike irite uru site na iwepụ ọrụ! Mgbapu ngwa ngwa Mod na Infinite Stamina nọkwa.
Ama onye iro (anya / aha)
Wepụ ụzọ ámá ESP
Ebumnuche igodo customizable
FOV & ezigbo ụkpụrụ customizable
Banyere gbanahụ Tarkov Classic
Ndị gị na hacked na n'oge gara aga na-yiri ka maara nke otú mkpa ịhọrọ ezi ngwá ọrụ nwere ike ịbụ, dị ka ọ bụ ihe dị iche n'etiti “ndụ ma ọ bụ ọnwụ” na ọtụtụ mgbe. Iji EFT kpochapụwo na-enye gị ohere ịnweta ụfọdụ atụmatụ ndị kachasị ike etinyere na aghụghọ, mana anyị na-eme ya n'ụzọ dị nchebe. Can nwere ike enuba mgbe ị na-eji nke a cheat, dị ka mbanye anataghị ikike UI ga-ezo site na ndị na-ekiri gị! Ọ bụ mpụga aghụghọ nke dị mfe iji, nke pụtara na ndị nwere ikike ịbanye na ndị mbido nwere ike irite uru na ngwa ọrụ a dị ịtụnanya! Ọ naghị arụ ọrụ na ọnọdụ ihuenyo zuru oke, a ga-azụkwa HWID Spoofer iche iche.
Kedu ihe kpatara iji gbanahụ Tarkov Classic karịa ndị ọzọ nyere gị?
Ugboro ole ka ndị ọzọ na-enye gị ọrụ jụrụ? Ọ bụrụ na nke a bụ oge mbụ ị na-azụta igodo ngwaahịa n'aka anyị ebe a na GamePron, ị meela nhọrọ ziri ezi! Enweghị onye nrụpụta ọzọ n’ebe ahụ nwere mmasị inyere onye ọrụ ya aka, agbanyeghị ihe ọ bụla. Ihe kachasị mkpa anyị ga-abụ otu, nke na-enye ndị ahịa anyị ihe kacha mma hacking nwere ike ime. Mgbe ị chọrọ ịmata na gị ego gị na-nọrọ ebe kwesịrị ekwesị, ịzụta anyị EFT Omuma mbanye anataghị ikike bụ nke zuru okè kwesịrị ekwesị. Imeru ego na hacks nwere ike ime ka a machibido gị iwu ugbu a bụ ihe gara aga!
Dịka ụdị asọmpi ọ bụla ọzọ, ime mgbanwe ga-abụ ihe ị ga-amata oge na-aga. E nwere ụfọdụ hacks si n'ebe na-adịghị enye ihe na-egwuregwu egwuregwu, nke pụtara na ị ga-achọ ime mgbanwe gị niile tupu mbanye anataghị ikike onwe ya emeghewo. Mgbe ị nwere menu egwuregwu ị na-adabere, ọ bụghị naanị na ị nwere ike ịmeghe egwuregwu ahụ mgbe ị na-eme mgbanwe, mana ọ pụtara na ọ ga-adị ihe agaghị ekwe omume ijide hacking. Toggling na mbanye anataghị ikike na na anya dịtụbeghị nke a dị mfe, anyị na-ekwe gị nkwa!
Keyzụta igodo ngwaahịa nke dabara na mkpa gị n'ụzọ zuru oke ma mbanye anataghị ikike ruo mgbe ị ga-eju afọ site na iji EFT Classic!
Njikere Na-achị with our Escape si Tarkov Ochie mbanye anataghị ikike?